धनुष्टंकार रोगविरूध लगाइने टिटी खोपबारे जानकारी
नोभेम्बर 15, 2018 नोभेम्बर 15, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments टिटी खोप, धनुष्टंकार
धनुष्टंकार रोगविरूध लगाइने टिटी खोपबारे जानकारी ! आवश्यकता समयको माग हो । आज नेपालमा के के चिजको आवश्यक छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आज मैले धनुष्टंकारविरूध लगाउने खोपको विषयमा केही लेख्न मन लाग्यो । मानिस सामाजिक प्राणी हो काम गर्दा होस वा जुनसुकै समयमा पनि हतियारले चोट लाग्न सक्छ ।
सवैभन्दा बढी असर गर्भ अवस्थामा लगाउनुपर्ने टिटी खोप नपाउदा ठूलो समस्या भएको देखिन थालेको छ । दुर्घटना, फलाम वा खिया लागेको सामानले चोट पुर्याउदा तथा जनावरले टोकेमा टिटानस ब्याक्टेरिया मार्न २४ घण्टाभित्रै लगाउनुपर्ने टिटानसविरुद्धको भ्याक्सिन हाल देशभरि नै अभाव भएको छ ।
टिटानस रोग मुख्यतया सुत्केरी हुने बेलामा फोहर गरेर सुत्केरी गराइयो भने र खिया लागेको वा फोहर ब्लेडले बच्चाको नाल काटियो भने आमा र बच्चामा हुने गर्छ । बच्चामा हुने त्यस खालको टिटानसलाई नियोनेटल टिटानस (Neonatal Tetanus) भनिन्छ । नेपालबाट नियोनेटल टिटानस उन्मुलन भैई सकेको भनेर सन् २००५ डिसेम्बरमा भनिएपनि २००७ मा १३ जना यसका रोगी बच्चाहरु भेटिएका थिए ।
धनुष्टंकार क्लस्त्रिडिउम टिटानी नामक ब्यक्टेरियाको सङ्क्रमणले हुन्छ । धनुष्टंकार प्राय : बच्चालाई लाग्ने रोग हो । मानिस, गाई, घोडा, बाख्रा जस्ता जनावरको दिसा, खिया लागेका हतियार, प्रदुषित माटो वा बच्चाको नाइटोबाट शरीरभित्र जीवाणु प्रवेश गर्दछ ।
आजकल सामान्य हतियार लागे पनि टिटी खोप लगाउने चलन बढी देखिएको छ तर खै नलागेको हतियारले चोट लाग्दैमा टिटी खोप लगाउन आवश्यक हुदैन । आजकल हरेक चिजको फेसन नै बनिसकेको छ ।
← मधुमेह र यसवाट बच्ने उपाय
दाँत हेरेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ मानिसको स्वभाव र भाग्य →
मस्तिष्कलाई आघात पुर्याउने १० आनी-बानीहरु
जनवरी 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
लामो आयु बाँच्न के गर्नुपर्ला ?
जुन 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
रक्तचापवाट कसरी बच्ने ?
डिसेम्बर 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक 5